Mudaharaad Ka Dhacay Ceerigaabo Iyo Khasaaro Ka Dhashay + Sawiro – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Mudaharaad Ka Dhacay Ceerigaabo Iyo Khasaaro Ka Dhashay + Sawiro
Mudaharaad Ka Dhacay Ceerigaabo Iyo Khasaaro Ka Dhashay + Sawiro
Magaalada Ceerigaabo ee Gobolka Sanaag ayaa Maanta waxaa ka dhacay Banaanbax rabshado watay,kaasi oo dhigeen dadka deegaanka,waxaana ka dhashay Khasaaro.
Dadweyne farabadan oo ah ayaa isugu sooo baxay bartamaha Magaalada,kuwaasi ah oo ka careysnaa dagaalkii dhexmaray Ciidamo uu hogaamiye u yahay Kornel Saciid Cawil Jaamac Caare iyo kuwa ka tirsan Ciidamada Soomaaliland,kaasi oo ka dhacay deegaan duleedka Bari ka xiga Gobolka Sanaag.
Sidoo kale dadka dhigaayay Banaanbaxa ayaa Sawirro laga soo waxaa la arkayay,iyagoo Wadooyinka waaweyn ee Magaalada Ceerigaabo ku gubaya taayaro waaweyn,isla markaana Wadada ku xiray dhagxaan iyo Birro.
Mararka qaar ayaa waxaa gudaha Magaalada laga maqlayay rasaas xoogan oo ay ridayeen Ciidanka amniga Ceerigaabo,waxaana ku dhaawacay rasaasta hal ruux oo shacab ah.
Inta uu socday Banaanbaxa ayaa hakad galay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga,waxaana haatan weli gudaha Magaalada Ceerigaabo laga maqlayaa rasaas goos-goos ah.
Previous articleSafiirka Cusub ee Ruushka oo Warqadaha Aqoonsiga laga guddoomay +Sawirro
Next articleSirdoonka Kenya oo sheegay in Al-shabaab qorsheynayaan weerarro ay ka geystaan gudaha dalka Kenya
﻿Khubaro Ka Digay 4-Caado oo Kansar Horseeda.. Waxaa Ka Mid Ah...